I-PVC eguqukayo yabenzi benaliti - China iFlexible PVC yePlanti yeZitofu kunye nabaxhasi
Fumana imveliso apha
Iigreyina zeplastikhi zokuKhanya okuKhanyayo okuPhezulu kwiSandlipper
I-INPVC inikezela uluhlu olubanzi lwe-100% yeVirgin PVC iikhompawundi ezisetyenziselwa ukuveliswa kweKiddy yaBantwana iJelly Shoes. Izihlangu zethu zinokuxhathisa okuphezulu koomatshini, ukusebenza ngokukuko ekusebenzeni, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nembonakalo ephezulu. Sinikezela ulwakhiwo olwenziwe ngokwezifiso kunye neemfuno ezizodwa ngokuqinisekiswa komgangatho kunye neenkonzo. IPolyvinyl chloride Compound ibonelela ngesiliphu sakho kunye neembadada, ubhetyebhetye obuphezulu kunye nomphezulu ogudileyo.Iinketho zemibala eyahlukeneyo ziqinisekisa ...
I-Eco-friendly IPlastiki eNtsha yaBantwana yaBantwana iibhutsi zeNaliti
I-INPVC inikezela uluhlu olubanzi lwe-100% yeVirgin PVC iikhompawundi ezisetyenziselwa ukuveliswa kweKiddy yaBantwana iJelly Shoes. Izihlangu zethu zinokuxhathisa okuphezulu koomatshini, ukusebenza ngokukuko ekusebenzeni, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nembonakalo ephezulu. Sinikezela ulwakhiwo olwenziwe ngokwezifiso kunye neemfuno ezizodwa ngokuqinisekiswa komgangatho kunye neenkonzo. Uqoqosho, i-polyvinyl chloride eguquguqukayo (i-PVC, okanye i-vinyl) yaziwa kakhulu njengezinto zeplastiki ezenza izicathulo zemvula ezicacileyo, ezimibalabala, ezikhanyayo. Izinto zethu eziphathekayo ...
I-PVC Transparent Granules yaBantwana yeJelly Shoes yeembadada
I-INPVC inikezela uluhlu olubanzi lwe-100% yeVirgin PVC iikhompawundi ezisetyenziselwa ukuveliswa kweKiddy yaBantwana iJelly Shoes. Izihlangu zethu zinokuxhathisa okuphezulu koomatshini, ukusebenza ngokukuko ekusebenzeni, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nembonakalo ephezulu. Sinikezela ulwakhiwo olwenziwe ngokwezifiso kunye neemfuno ezizodwa ngokuqinisekiswa komgangatho kunye neenkonzo. Izicathulo zeJelly, ezaziwa njengejeli, zenziwe ngePV ngokupheleleyo kwaye zibonakala ngokungafihlisiyo zikhangeleka njengejeli. Zenziwe ngokupheleleyo kwi-PVC, ezi mbadada zejeli zine ...
Flexible Polyvinyl chloride Izinto For PVC iibhutsi Inaliti
Iibhutsi ze-PVC ezaziwa njengeebhutsi zemvula okanye iigumboots, zizibhotshi ezingangenwa ngamanzi ezenziwe ngePVC Compound. Iibhotshi ze-PVC zihlala zingaphantsi kwamadolo kwaye ngokwesiko zinxitywa kwindawo ezinodaka okanye ezimanzi. Iibhutsi ze-PVC azikhuseli nje iinyawo ekubeni zimanzi, zihlala zinxitywa kwimisebenzi emininzi kubandakanya ifashoni, ukuloba, ukulima, ukwakhiwa, njlnjl. inemibala eqaqambileyo, inqabile ukubola kwaye ...
Iimveliso zePvc zeMveliso yezihlangu eziCwangcisiweyo kunye neeGwebu
I-PVC, i-Polyvinyl Chloride yipolymer ye-thermoplastic polymer esetyenziswa kakhulu inaliti yezihlangu. I-PVC Soles yenziwa ikakhulu ngenkqubo yenaliti ethe ngqo kodwa inokwenziwa njenge-PVC iibhodi zegwebu ezincinci zeselfowuni ezinekhalenda kunye nokusikwa. Inokuguquguquka okuhle kunye nokumelana ne-abrasion ngexabiso elinomtsalane. I-PVC soles nayo ine-insulation efanelekileyo kunye neepropathi zokumelana. Zineendleko ezifanelekileyo kwaye zinokunye nolusu. Ngokufunda kunye nokuvelisa amava kushishino lwezixhobo ze-PVC ...
Iigrafu zePVC zeSlipper Upper V-Straps Inaliti
Singomnye woovulindlela kwishishini lokudibanisa i-PVC e-China. Ezi khompawundi zenziwe ngokukodwa kwaye zenzelwa ukufezekisa iimfuno zeli xesha langoku ngoncedo loomatshini abaninzi bale mihla abakhoyo ngoku. Siqinisekisa ukuhlangabezana nemigangatho yamanye amazwe kwaye sigcina umgangatho wemveliso kwindawo nganye yemveliso. Umtya wethu we-PVC Umtya wenziwe kusetyenziswa izinto ezinobungakanani bendalo kubushushu obulungileyo kwaye isetyenziselwa indawo eyodwa ...
I-INPVC inikezela uluhlu olubanzi lwe-100% yeVirgin PVC iikhompawundi ezisetyenziselwa ukuvelisa inaliti yezihlangu zezilwanyana. Izihlangu zethu zePVC zezilwanyana ezifakwayo ezinokuxhathisa okuphezulu koomatshini, ukusebenza ngokukuko, ubuchule kunye nokubonakala okuhle. Sinikezela ulwakhiwo olwenziwe ngokwezifiso kunye neemfuno ezizodwa ngokuqinisekiswa komgangatho kunye neenkonzo. Isixhobo se-100% ye-PVC ye-resin + eyongeziweyo ye-Eco-friendly i-Hardness Shore
Yasekwa ngonyaka we-1993, iqela le-INPVC ngomnye wabakhokeli abaphambili be-PVC iikhompawundi kunye ne-PVC granules e-China.Senza izixhobo zezihlangu kunye nezihlangu ezimbaxa ezisetyenziswa koomatshini bokujikeleza kunye nokuma nkqo kwenaliti kunye noomatshini abazenzekelayo. Kwi-INPVC, sinika uluhlu olubanzi lweepellets zePV ezinokusetyenziselwa ukwenza izihlangu ezikumgangatho ophezulu kunye neenyawo. Sinikezela ngezinto zePlastiki zezihlangu kulwenziwo olwahlukileyo kunye nemixube ekhethekileyo ngokwe ...